अस्ताउँदै गरेको सूर्य सोमवार, चैत्र ९, २०७७
टिपरको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु आइतवार, चैत्र ८, २०७७
जुम्लामा ५६ हजार नागरिकता वितरण शनिवार, कार्तिक २९, २०७७
कर्णालीमा ११० जना कोरोना संक्रमित थपिए सोमवार, असार १, २०७७
भारतबाट आएका थिए सप्तरीका कोरोना संक्रमित सोमवार, जेठ १२, २०७७
स्वर्गको गाउँमा पूर्वाधारको कमी, गाउँलेलाई सास्ती ! चारैतिर डाँडाकाँडा र हिमालले घेरिएको गाउँ । उत्तरतिर भएर बग्ने काली र दक्षिण भएर बग्ने तिङ्कर खोलाको सुसाइ । हिमाली क्षेत्रको चिसो हावा र बिहान घामको झुल्कोसँगै यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य । शान्त वातावरण । सुनसान जङ्गलभित्रको घनाबस्ती । गाउँ वरिपरि फूलझैँ फक्रिएका सल्लाका रुखहरु । यो ठाउँमा बस्नेलाई लाग्छ, ‘हामी स्वर्गको नजिकै छौँ ।’ सोमवार, जेठ १२, २०७७
क्वारेन्टाइनमै बुवाको काज किरिया बुबाको अन्तिम संस्कारमा जान उनीहरु हारगुहार गरेका थिए । तर, नेपाल प्रवेश गर्न सहज नहुँदा प्रवासको शिविरमै दुबै जना सेतो कपडामा किरियामा बसेका छन् । बुबाको दाहसंस्कारमा त उपस्थित हुन पाएनन् नै नेपाल प्रवेशको अनुमति नपाएपछि क्वारेन्टाइनमै किरिया बसेका छन् । भट्टद्वयका बुबा देवदत्त भट्टको गत वैशाख ३१ गते स्वर्गारोहण भएको थियो । सोमवार, जेठ ५, २०७७
लकडाउनमा महाकाली तरेर घर फर्किए नेपाली महाकाली नदीमा ट्युवमार्फत बैतडीमा ४० जना भित्रिएका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकेन्द्रसिंह नेगीले बताए । सीमा सील रहेका बेला अवैध रुपमा सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर उनीहरु नेपाल आएका हुन् । उनीहरु सबैलाई अनिवार्य १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरिएको उनले बताए । बिहिवार, जेठ १, २०७७
गोलीसहित सम्पर्कविहीन प्रहरी जवान मृत फेला मंगलवार, बैशाख ३०, २०७७
खुल्ला सीमा र नदी तरेर स्वदेश फर्किदै नेपाली ! नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा नाका बन्द गरिएको एक महिना बढी भयो । नेपाल फर्किन नपाएका सयौँ मजदूर अहिले स्वदेश फर्किन जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न थालेका छन् । नेपाली आफ्नो देश फर्किन नपाउँदा अहिले नाका फेर्दै स्वदेश फर्किन थालेका छन् । सुरक्षाकर्मीलाई छल्दै उनीहरु महाकाली नदीमा हाम फालेर, ट्युब तरेर स्वदेश आउँदैछन् । शनिवार, बैशाख १३, २०७७
राहत पनि दिइएन, काम गर्न पनि पाइएन ! “राहत पनि पाएनौँ, ज्यालादारी गर्न बाहिरी जिल्ला गएका छोराहरु पनि उतै अलपत्र परेका छन्”, टीकापुर–८ सूर्यपुरकी रेखा वादीले भने, “म एकल महिला हुँ राहत नपाएपछि सरकारले दोस्रो किस्ताको भत्ता दिएको भए किनेर खान्थ्यौँ ।” उनलका अनुसार वडा कार्यालयले पाँच कठ्ठा जमिन छ भन्दै राहत दिन मानेन । “सात जनाको परिवार छ, पाँच कठ्ठाको अन्न दुई महिना मात्र पुग्छ”, रेखा भन्छिन, “घरमा अन्न छैन, न त ऋण पाइन्छ न सापटी पाइन्छ ।” बिहिवार, बैशाख ११, २०७७
राहतको माग गर्दै वडा कार्यालयमा आन्दोलन टीकापुर नगरपालिकावासीले आफूहरु राहत पाउनबाट वञ्चित भएको भन्दै वडा कार्यालयमा सामाजिक दूरी कायम नराखी धर्ना दिन थालेका छन् । मंगलवार, बैशाख ९, २०७७
नयाँ भेन्टिरलेटर खरीद गर्दै महाकाली अस्पताल ! आइतवार, बैशाख ७, २०७७
एक हजार भारु तिरेर स्वदेश फिर्ता ! लकडाउनका कारण विषुमा घर पुग्न नसेकेका दुबै जनालाई मदकोट क्षेत्रमै पनि भोकभोकै बस्नुपरेको थियो । ठेकेदारले घर जाउ भन्यो, बस्ने खाने पैसा थिएन्, भोकभोकै बस्नुभन्दा तीन दिन पैदल हिडेर उनीहरु बिहीबार साँझ बालुवाकोट गाउँ आइपुगें । १४ जनाको समूहमा रहेका उनीहरुले शुक्रबार बिहान दत्तुको बेतमा एक हजार रुपैयाँ भारु तिरी जोखिम मोलेर महाकाली नदी कटाए । भारतीयले ट्युबमा महाकाली नदी तारेबापत एक हजार रुपैयाँ भारु लिएको हो । शुक्रवार, बैशाख ५, २०७७
१५ बर्षीया किशोरीमाथि सामुहिक बलात्कार ! १७ बर्षीया किशोरीमाथि बलात्कार भएको २४ घण्टा नबित्दै कैलालीमा अर्की किशोरीमाथि पनि सामुहिक बलात्कार भएको छ । कैलालीको भजनीमा १५ वर्षीया किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ । बुधवार, बैशाख ३, २०७७
१७ बर्षीया किशोरीमाथि सामुहिक बलात्कार कैलालीको चनौरामा १७ बर्षीया किशोरीमाथि सामुहिक बलात्कार भएको छ । सोमबार दिउँसो सडकमा आफ्ना साथीहरुसँग हिडिरहेकी किशोरीलाई उठाएर जंगलमा लिएर चार जनाले बलात्कार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । मंगलवार, बैशाख २, २०७७
दुर्गमका नागरिकको पनि कोरोना परीक्षण गर्न सांंसद रसाइलीको माग एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सांसद रसाइलीले दुर्गममा स्वास्थ्य सेवा र पहुँच नभएपनि सुदुरपश्चिमका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा भारतबाट आएका मानिसहरुको संख्या ठूलो भएकाले हुवाईमाध्यमबाट भएपनि उनीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न माग गरेका हुन । आइतवार, चैत्र ३०, २०७६
यहाँ छन डा. गोविन्द केसी यतिबेला कोरोनाबाट आक्रान्त बनेको सुदुरपश्चिममा छन, डा. केसी । त्यो पनि सुदुरपश्चिमको पहाडी जिल्ला डडेल्धुरा पुगेका छन । बिरामीको उपचारका लागि उनी डडेल्धुरा पुगेका हुन । शुक्रवार, चैत्र २८, २०७६